विस्लावावा सिक्म्बोर्स्का: उनी को हुन् र कुन पुस्तक उनले लेखेका छन् | वर्तमान साहित्य
विस्लावा सिजिमोर्स्का फाउंटेन: the2banks
विस्स्लावा स्याम्बोर्स्का उनी १ 1996 2012 in मा साहित्यको नोबेल पुरस्कार जितेको तथ्यलाई बाबजुद विश्वमै कम परिचित कविहरु हुन्। दुर्भाग्यवस, हामी अब उनको उपस्थितिमा भरोसा गर्न सक्दैनौं किनकि उहाँ २०१२ मा बित्नुभयो, तर उनको काम समयको साथ जारी रहन्छ र निश्चय पनि तपाईंले यस बिन्दुमा कुनै समय आउनुभयो।
तर, विस्लावा सिजिमोर्स्का को थिए? उसले के लेख्यो? तपाई किन आफ्नो देश र विदेश दुबै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ? ती सबै र अझ धेरै, जुन तपाईलाई आज थाहा हुनेछ।
1 विस्लावा सिजिमोर्स्का को हो?
2 विस्लावा शाइम्बोर्स्का साहित्यमा
3 उनले के लेखेका थिए
विस्लावा सिजिमोर्स्का को हो?
विस्लावा सिजिमोर्स्का वास्तवमै उनको नाम होइन। यस कविको पूरा नाम थियो मारिया विस्लावावा अन्ना सिक्म्बोर्स्का। उनको जन्म १ 1923 २ in मा प्रोभेन्टमा भएको थियो (अहिले हामी पोल्याण्डमा कार्निक भनेर चिनिन्छौं)।
उनका बुबा कर्नीक शहरको मालिक व्लादिस्ला जामोइस्कीलाई काउन्टीका साथ थिचिए र उनको एक वर्ष पछि उनको मृत्यु भयो भने उनको परिवार टोरुनमा बसाई सरेको थियो, जहाँ विस्लावा सिजेम्बोर्स्का हुर्किसकेका थिए।
उहाँ निकै चिन्ताजनक हुनुहुन्थ्यो, यति नै कि five वर्षको उमेरमा, जब उहाँ स्कूलमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कविता लेख्न थाल्नुभयो। यो पनि भनिनुपर्दछ कि उसको परिवारमा सबै जना पढ्न चाहक थिए र उनीहरू पुस्तकहरू पढ्थे र बहस गर्थे। यसका साथै उनीसँग "इनाम" पनि थियो। र यो यो हो कि विस्लावा सिजम्बोर्स्का कविताहरू उनका पिताका हातमा लागेका थिए, र यदि उनी तिनीहरूलाई मन पराउँछन्, तब उनले उनलाई एउटा पुरस्कारको रूपमा एउटा सिक्का दिए, जुन कि उसले आफूले चाहेका सबै किन्न सक्ने थियो।
१ 1931 1940१ मा उनीहरू फेरि बसाइँ सरे र उनले क्राकोको कन्भेन्ट स्कूलमा भर्ना गरे पनि उनले त्यहाँ पढाइ सिध्याएनन्। यस समयमा उनलाई दर्शाउने एक आघात उनको पनी मृत्युको निस्सन्देह थियो। परिवार फेरि सर्न सकेन, तर क्राकोमै बसे जहाँ केहि बर्ष पछि दोस्रो विश्वयुद्धको साथ १ XNUMX in० मा उनीहरूले जर्मनले पोल्याण्ड कब्जा गरे।
यसको कारणले, पोलहरू सार्वजनिक विद्यालयहरूमा जान सकेन। तर यसले विस्लावा सिजिमोर्स्कालाई रोक्न सकेन जसले आफ्नो पढाइ जारी राख्ने निर्णय गरे र वावेल क्यासलस्थित भूमिगत स्कूलमा गरे। यसैले, १ 1941 .१ मा उनले माध्यमिक विद्यालयको अध्ययन पूरा गरे।
दुई वर्ष पछि, उनले रेलवेमा काम गर्न थालिन्, यसैले जबरजस्ती श्रमको लागि जर्मनी पठाइएको होईन। साथै यस समयमा उनले आफ्नो बाँकी समय एक अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकको लागि दृष्टान्तहरू बनाउन र दुवै छोटो कथा र कविताहरू लेखे।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यले विस्लावावा स्याम्बोर्स्कालाई क्राकोको जगीलोनियन विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्न मद्दत पुर्‍यायो, जहाँ उसले पोलिश साहित्यको पक्ष लिए तर पछि उनले आफ्नो करियरलाई समाजशास्त्रमा परिवर्तन गरे। यसको बावजुद उनी आफ्नो पढाइ सिध्याउन असमर्थ भए, तर १ 1948 .XNUMX मा छाडियो।
जे होस्, त्यो छोटो विद्यार्थी अवधिमा, उनले अखबार र म्यागजिनहरूमा केही कविताहरू प्रकाशित गरे।
विस्लावा शाइम्बोर्स्का साहित्यमा
पहिलो कविता विस्लावा सिजम्बोर्स्का १ 1945 .XNUMX मा प्रकाशित भयो, दैनिक Diziennik Polski को एक साहित्यिक पूरकमा। यसको शीर्षक, म शब्द खोज्छु (Szukam धीमा)। र यसको मतलब उनी पहिलो मात्र होइन तर उनीहरूले कविताका लागि ढोका खोलिदिएका थिए अखबार र स्थानीय मिडियामा।
१ 1948 XNUMX मा, जब उनी कलेजबाट बाहिरिन्की थिइन कि उनीले त्यो सिकेकी थिइनन्, उनले एक शैक्षिक पत्रिकाको सचिवको रूपमा काम गर्न शुरू गरेकी थिइन् विशेष गरी त्यो अखबारले उनलाई पहिलो मौका दिजिएनिक पोल्स्की दिएका थिए। र उहाँ सचिव हुनुहुँदा नै उनले चित्रकार र कविको रूपमा पनि काम गरिन्, किनकि उहाँ कविता प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
वास्तवमा, १ 1949। In मा, उहाँसँग पहिले नै कविताहरूको पहिलो संग्रह थियो।
त्यसको लगत्तै पछि '52२ मा उनले अर्को कविता संग्रह प्रकाशित गरे, ड्लाटेगो जाइजेमी (यसैले हामी बाँचिरहेका छौं), जसमा उनीहरूको राजनीतिक विचारधाराले भरिएको थियो। र यो हो कि त्यसबेला उहाँ पोलिश वर्कर्स पार्टीको सदस्य बन्नुभयो, ठूलो समाजवादी भावनाको साथ कि उहाँ कविता संग्रहमा मात्र होइन तर अर्को पनि १ 1954 XNUMX मा पित्यानिया जादावने सोबी (प्रश्नहरू सोध्नुभयो) आफैं)
अब, समाजवादी भए पनि, तीन बर्ष पछि उनले कविताहरूको नयाँ संग्रह प्रकाशित गरे, वलानी डू येल (यतीलाई कल) जुन उनले एक प्रदर्शन गरे स्पष्ट निराशा र त्यो कम्युनिष्ट विचारधारा संग ब्रेक, र उनी कसरी आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरीन्, असन्तुष्ट कि त्यस किसिमको राजनीतिले कसरी काम गर्यो।
यसका साथै उनले मानवता, विशेष गरी स्टालिनवादप्रति चासो देखाए पनि उनले स्टालिनलाई कविता समर्पण गरे जहाँ उनले उनलाई घृणित हिममानव (यती) सँग तुलना गरे। त्यसबखत उनले साम्यवाद र समाजवादको त्याग गरे जुन उनले प्रकाशित गरेका दुई रचनाहरुलाई अस्वीकार गरे र उनीहरुबाट कहिल्यै सुन्न चाहेनन्।
उनले के लेखेका थिए
तपाईंले त्यो ध्यानमा राख्नु पर्छ विस्लावावा स्याम्बोर्स्काले writing बर्षको उमेरदेखि लेख्न सुरु गरे। भनिन्छ कि उनले 350 15० भन्दा बढी लेखिएका कविताहरू छोडे। किताबहरूमा उनले १ poetry भन्दा बढी कविता र गद्य लेखेका थिए। तर यति प्रशस्त भए पनि हामी भन्न सक्दैनौं कि यो विश्व प्रसिद्ध थियो, वास्तवमा यो त्यस्तो थिएन। उनीहरूले उनलाई उनको देशमा थोरै चिनेका थिए, तर बाहिर भने थिएनन्। जस्तो कि यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा थियो, यो उनीका अन्य रचनाहरूमा थियो: साहित्यिक आलोचना र अनुवाद।
त्यसोभए कहिले १ 1996 XNUMX in मा उनलाई साहित्यका लागि नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो, विस्लावावा स्याम्बोर्स्का अचम्ममा थियो, दुबै उनको लागि र ती सबैलाई जो त्यस घडीसम्म उनलाई चिन्दैनन्। अवश्य पनि, उनलाई मात्र सम्मानित गरिएको थिएन। यस अघि उनीसँग अरूहरू थिए, जस्तै १ 1963 in1991 मा पोल्याण्डको संस्कृति मन्त्रालयको पुरस्कार, १ 1995 XNUMX १ मा गोटे पुरस्कार; वा हर्डर पुरस्कार र सन् १ XNUMX XNUMX P मा पोज्ननको एडम मिक्युइभिज युनिभर्सिटि द्वारा मानद डाक्टरको रूपमा मान्यता प्राप्त।
१ 1996 XNUMX her उनका लागि उत्कृष्ट वर्ष थियो, नोबेल पुरस्कारले मात्र होइन, उनलाई पोल्याण्डको पेन क्लब पुरस्कारबाट पनि सम्मानित गरियो।
वर्षौ पछि, २०११ मा, उनले आफ्नो नवीनतम पुरस्कार मध्ये एक प्राप्त गरे, ओलाला बियालेगो आदेश (व्हाइट ईगलको अर्डर), पोल्याण्डमा सबैभन्दा बढी सम्मान प्राप्त भयो।
स्पेनमा तपाईं आफ्नो अनुवादित कामको अंश पाउन सक्नुहुन्छ, केहि पुस्तकहरू यी हुन्:
बालुवा को अन्न संग परिदृश्य।
खुशी प्रेम र अन्य कविताहरु।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं विस्लावा सिजम्बोर्स्का कविता मध्ये एक।
शब्दहरू द्वारा घोषणा
कसैलाई जो ठाँउ जान्छ
करुणाको (आत्माको कल्पना),
"उसलाई थाहा दिनुहोस्!" , उसलाई चेतावनी दिनुहोस्!
मलाई यो चर्को स्वरमा गाउनुहोस्
र नाच जस्तै मैले मेरो दिमाग गुमाए
कमजोर विलो अन्तर्गत रमाहट
सदाको लागि आँसुमा भाँच्ने कगारमा।
म बन्द गर्न सिकाउँछु
विचार गर्ने तरिकाको साथ
तारांकित आकाश को,
sinantropus को जबडा,
म माया फिर्ता गर्दछु।
घाँटी सम्म घाममा नुहाएपछि,
हावा नाच्ने बेलामा तपाईं झूट बोल्नुहुन्छ
(तपाईंको कपाल को नाच मास्टर)।
"सपना" लाई प्रस्ताव गर्दछ।
वृद्धहरूलाई जो नर्सि homes होमहरूमा छन्
मर्नु आफूलाई सेवा गर्नुहोस्
सन्दर्भ बिना अगाडि आउनुहोस्
कुनै लिखित अनुरोधहरू छैनन्।
कागजातहरू नष्ट हुनेछन्
रसिद को स्वीकृति बिना।
मेरो हसबन्डका प्रोमिसहरूका लागि
- उसले र the्गले तिमीलाई धोका दियो
जनसंख्याको संसारको, यसको हलचल संग,
विन्डोबाट एक कुकुरको साथ,
कि तपाईं कहिल्यै एक्लो हुनुहुन्न
उदास, शान्त र सास फेर्दै।
म जवाफ दिन सक्दिन
रात, दिनको विधवा।
Trad। एल्ज्बियटा बोर्तकिभिस
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » विस्स्लावा स्याम्बोर्स्का
नोएल पेरेज भन्यो
म ती मध्ये एक हुँ जसले ढिलाइ फेला पारे र मेरो मनपर्ने कविहरू मध्ये एक हुन छोडेन। धेरै कविताहरू छन् जसले मलाई चकित पारे, तर मलाई पहिलो चोटि हिर्काएको निस्सन्देह नम्बर पाई थियो।
नोएल पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्